Mpamily taksibe Maro ireo mafy loha rehefa alain’ny polisy ny taratasin’ny fiara
Tsy i Maneva sy i Jacky mpamily taksibe 135 sy zotra 105 ihany no namaly ireo mpitandro ny filaminana, rehefa lasan’ireto farany ny taratasin’ny fiara entiny,
Lozam-pifamoivoizana mateti-pitranga Ho hentitra kokoa ny fitsirihana ny fiara
Nihanahazo vahana tato ho ato ny lozam-pifamoivoizana teto amintsika. Saika namoizan’aina avokoa ny ankamaroan’izy ireny, antony nandraisan’ny sampandraharaha misahana ny fitsarana fiarakodia eny Alarobia fanapahan-kevitra hentitra.
Fanamboaran-dalana sy fanotofana tany Dibo-drano ny faritra iva
Miaina ao anatin’ny rano miakatra indray ny mponina eny amin’ny fokontany Anosizato Atsinanana amin’izao, tahaka izany ihany koa ny eny Isotry.
Landy Raveloson sy ireo solontenan’ny vondron’ny mpitatitra eto amin’ny tanànan’Antananarivo dia ny UCTU sy ny FMA . Ny fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin’ny CUA, ny UCTU ary ny FMA moa no nodinihina. Tokony hanao « contre visite » eny Antsakaviro avokoa ireo fiara fitateram-bahoaka eto an-drenivohitra isaky ny 4 volana, izany hoe in-3 isan-taona. Hanao fampitahana ny lisitr’ireo fiaraha- miasa any anaty koperativa tsirairay ny vondron’ny mpitatitra sy ny kaominina mba hahafahana mahafantatra ireo fiara tena miasa marina ary ahalalana mazava ihany koa ny isan’ny fiara mpitatitra rehetra eto Antananarivo . Hametaka « autocollant » eo amin’ny fitaratra anoloan’ny fiara mpitatitra rehetra ny CUA mba hampiavaka ny mpitatitra an-tanàn-dehibe sy ny mihoatra ny tanàn-dehibe, mba hanavahana ihany koa ireo fiara mpitatitra tena izy ary ao anaty koperativa ara-dalàna marina, ary ho fanehoana ihany koa ny fiaraha-miasa eo amin’ny CUA, ny UCTU ary ny FMA. Ny tanjona ho an’ny CUA, UCTU ary ny FMA dia ny fanentanana ny mpitatitra rehetra eto an-drenivohitra hiverina hanaraka ny rafitra ara-dalàna mba hanomezana fahafahampo ny mpanjifa, hoy hatrany ny fanazavana raha nampahafantatra ireo teboka tapaka ireo.